Matrox InfoComm 2019 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲ၏လေးအကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Matrox InfoComm 2019 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲ၏လေးအကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
Matrox InfoComm 2019 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲ၏လေးအကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
Montreal မှာ Quebec - ဇွန်လ 25, 2019 - Matrox®ယင်း၏ဧကရာဇ် EDGE 4K / Multi-ကြောင်းကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည်HD ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ, QuadHead2Go ™ Multi-မော်နီတာ controller စ Extio ™3အိုင်ပီ KVM Extender တွေ, Maevex 6120 dual-4K စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအန်ကုဒ် InfoComm 2019 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲလေးဂုဏ်သိက္ခာအကောင်းဆုံးများ၏လက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။
Show ကိုဆုပေးပွဲ၏ InfoComm အကောင်းဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အမျိုးအစားစံဆန့်ကျင်သောစွမ်းဆောင်ရည်, အင်္ဂါရပ်ထား၏ပေါများကြွယ်ဝ / ဆက်စပ်မှု၏လွယ်ကူခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်ဤဖြတ်တောက်-အစွန်းထွက်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်သူကို AVIXA နှင့် CTS-လက်မှတ်အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် On-site ကိုတရားသူကြီးတစ်ဦး panel ကိုတို့ကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြ အသုံးပြုမှု, ကွန်ယက်ကိုဖော်ရွေများနှင့်တန်ဖိုးကို / ရွယ်။
Matrox ရဲ့ဆုရ lineup:
Matrox ဧကရာဇ် EDGE ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 3840G / 2160G-SDI ကမ်းလှမ်းနေချိန်မှာ 60x1920p1080 မှတက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသို့မဟုတ် quad 60x3p12 ဗီဒီယိုကိုမကယ်မလွှတ်နဲ့ SMPTE Multi-protocol ကို streaming များ options များနှင့်အတူ ST 2110 25 GbE ဆက်သွယ်မှု။ 2019:42-bit မှာမော်ဒယ်ချုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် 0: InfoComm 8 သည်ဧကရာဇ် EDGE4၏အဖြစ်သင်္ဘောဟာဧကရာဇ် EDGE2စဉ်210-bit, webcasts နှင့် over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ပေးပို့ရန်အတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝေးလံခေါင်သီပေါင်းစည်းမှု (REMI) Workflows သည်။
Matrox QuadHead2Go ™ Multi-မော်နီတာနဲ့ controller ပြည့်စုံအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူမည်သည့်ဗီဒီယိုအားအရင်းအမြစ်ကနေမဆိုအရွယ်အစားမဆိုဗွီဒီယိုကိုမြို့ရိုးအစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပါဝါ။ InfoComm မှာထုတ်ဖော်ပြသ, သစ်ကို QuadHead2Go နဲ့ controller တစ်ခုစီကိုစတုဂံသို့မဟုတ်အနုပညာ configurations အတွက်အထိ display လေးခုဖြတ်ပြီးတစ်ခုတည်းကိုဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်မောင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူများက Ultra-အကြီးစားဗီဒီယိုကိုရိုးကိုဖန်တီးရန် Matrox သို့မဟုတ် Third-party ဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်အတူမျိုးစုံ QuadHead2Go ယူနစ်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် ။
Matrox Extio34: 60, Dual 4Kp4 4: 4: 30 နှင့် 4Kp4 4: 2: တစ်စံတစျခု Gigabit Ethernet (GbE) ကွန်ရက်မှာ unprecedentedly အနိမ့်သော interlacing ရှိနေပါသည်ကျော် 60 စွမ်းဆောင်ရည်အိုင်ပီ KVM Extender တွေခြွင်းချက် 4Kp44ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ Extio3ကိုလည်းအကြီးအကျယ်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံအရင်းအမြစ်စနစ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်အသုံးပြုသူများအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အမှတ်တံဆိပ် feature အသစ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ Extio3ကတ်များနှင့်ကရိယာကွန်ရက်ပေါ်တွင်မည်သည့်ဝေးလံသောနေရာသို့လုံလုံခြုံခြုံလမ်းကြောင်းမဆိုစနစ် IP ကိုကျော်တစ်ဦး၏အရွယ်မှာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော KVM matrix ကိုသရုပ်ဖော်, COTS ကွန်ယက်ကို switches များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Matrox Maevex 6120 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများတစ်ပြိုင်နက် dual-4K ဖမ်းမိ, အန်ကုက်လုပ်ပါ, စမ်းချောင်းနှင့်စံချိန်-နှင့်အတူတစ်ဦးစံတစျခု GbE network ပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသော configurations-အားလုံးအတွက် ပို. ပင်လိုင်းများ stream နှင့်စံချိန်ဖို့ရွေးချယ်စရာကယ်နှုတ်တော်မူ။ Maevex 6120 ယခုလည်း HLS ဖွ, IPv6, fMP4 နှင့်ဆက်ပြောသည် Multi-ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ MOV ထောက်ခံမှုအဖြစ် Youtube, Facebook မှတိုက်ရိုက်, Wowza, LiveScale နှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူရိုးရှင်းသောနှင့် automated cloud-service ကိုဆက်သွယ်မှုလည်းပါဝင်သည်။
"ဒါကကျနော်တို့ကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှိသည်အင်ဂျင်နီယာများ၏အနံ, R & D နှင့် UX ကိုခွက်တဆယ်ထင်ဟပ်တင်သွင်းအဆိုပြုသူတစ်ဦးကြွယ်ဝသောလယ်ပြင်၌ဖြစ်ခဲ့သည်," အသံနှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာအယ်ဒီတာစင်သီယာ Wisehart ကဆိုသည်။ အနိုင်ရအသင်းများဖို့ "ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ဖြတ်ပြီးအလုပ်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
"နောက်တကြိမ်, InfoComm လိမ္မာပါးနပ်တဲ့အဆငျ့ဆငျ့ဘွားဆောင် ခဲ့. , ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဘို့ဤ exuberant ဆု entries တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ field ရဲ့အနံအတွက်အလွယ်တကူသိသာကြီး", Matt Pruznick, AV စနစ်နည်းပညာမှာအယ်ဒီတာကဆိုသည်။ "ဤမျှလောက်များစွာသောထူးချွန်ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူ, ဆုရရှိသူ၏ဤကို select လုပ်ပါအုပ်စုစာရင်းကိုချကျဉ်းမြောင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးဝီရိယစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ AV စနစ်နည်းပညာရဲ့အကောင်းဆုံး Show ကိုဆုပေးပွဲ-သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏၏အ 2019 လက်ခံသူများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်၏တစ်ဦးထွန်းလင်းဥပမာများမှာဂုဏ်ပြုသောအစွမ်းကုန်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူဖြစ်၏။ "
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း အန်ကုဒ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု ip kvm သွယ်တန်း OTT အသံသွင်းချက် ဝေးလံခေါင်သီပေါင်းစည်းမှု ဝေးလံခေါင်သီ prodctuion SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows လွှ ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကို Controller ကို webcasts	2019-06-25
ယခင်: မြက်ချိုင့်နှင့် CenturyLink 100G high-speed Link ကိုကျော်အဝေးမှထုတ်လုပ်မှုစှမျးသရုပ်ပြ
နောက်တစ်ခု: မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် International